Baaq lagu joojinaayo Xasuuqa Muslimiinta Burma | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Baaq lagu joojinaayo Xasuuqa Muslimiinta Burma
Baaq lagu joojinaayo Xasuuqa Muslimiinta Burma
Madaxda Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa soo saaray baaqyo looga codsanayo Madaxda dalka Myanmar inay joojiyaan xadgudubyada ka dhanka ah muslimiinta dalkaasi ee Rohinga ,oo sababtay inay kumaanaan kun qof ay ka barakacaan degaanadooda ,una gudbaan dhanka xadka ay Burma la wadaagto dalka Baangaladesh.
Baaqaan ayaa sidoo kale Madaxda iyo Xukuumadaha Islaamka iyo Carabta ay ku tilmaameen xadgudbyada Ciidamada dalka Burma ay ku hayaan muslimiinta Rohinga in ay yihiin kuwo halis ah isla markaana ka hor imaanaya Qaanuunka Dowliga, loona baahan yahay in si deg deg ah wax looga qabto.
Sidoo kale baaqan ka soo baxay Madaxda Ururka Iskaashiga islaamka waxaa lagu soo dhaweeyay dadaalka Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ee ku wajahan Xukuumadda Mayanmar inay joojiso tallaabo kasta ee ka dhan ah Muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi.
Ururka Iskaashiga Islaamka,waxa ay ku baaqeen in loo dhega nuglaado baaqayda Caalamiga ah ee Golaha amaanka iyo kan Mujtama Dowliga ah.
Previous articleMudanayaasha Aqalka sare oo u codeeyey in dib loo dhigo Ajandihii ku saabsanaa arrintii Qalbi Dhagax
Next articleSuxufi:Noqo mid wax dhisa.